Afanyekwa na ụfọdụ ndị ọbịa ọhụụ na Tynt
Wenezdee, Machị 16, 2011 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Onye ọ bụla na-achọ ụzọ n'ụzọ zuru ezu leverage ha ọdịnaya, ndị Martech Zone adịghị iche. Ọtụtụ ndị na - agụ akwụkwọ gị ga - agụ ọdịnaya gị ma detuo ma mado mpempe akwụkwọ iji zigara ndị ọzọ ma ọ bụ tinye ya na nke ha. Ntdị bụ ọrụ ị nwere ike ịgbanye nke na-achọpụta nnomi ma tinye URL gị na ọdịnaya depụtaghachiri. Mgbe ị mado ọdịnaya ahụ na ebe ọzọ… voilà… ọdịnaya gị na-pasted yana a njikọ azụ gị na saịtị.
Nke a bụ nnukwu vidiyo na-akọwa ọrụ Tynt:
Tynt na-ekwu okwu banyere ike nke njikọ ahụ gbasara SEO. Ọ bụrụ na mmadụ defere ọdịnaya ahụ ma bipụta, ị nwere njikọ mara mma nke ọma na saịtị gị. Echere m na nke a dị mma - mana m na-ahụ uru karịa n'eziokwu na enyerela ndị na-agụ akwụkwọ njikọ ka ha pịa na ozi ịntanetị na ebe ndị ọzọ.
N’ọnwa gara aga, Tynt achọpụtala na e depụtaghachiri ọdịnaya m ugboro 703, ọnụọgụ ndị ọbịa wee pụta 4. E mepụtara njikọ 330 ọhụrụ maka ọdịnaya ahụ - na ndị ahịa email, ogwe ngwaọrụ ihe nchọgharị, na akwụkwọ ndị ọzọ (ọ bụghị ihe niile uru nke SEO… ma ikekwe ole na ole!). Ndị a stats ezughị iji gaa ọhịa n'elu, ma ọ bụ ọtụtụ maka nke a dị mfe ọrụ. Ma ọ dịkarịa ala, ahụrụ m eziokwu ahụ n'anya na m na-enweta otuto mgbe ndị folda na-edepụta ọdịnaya m ma ziga ha na netwọkụ ha.
Tynt na-enyekwa ụfọdụ nkọwa zuru ezu banyere ọdịnaya depụtaghachiri na mado - nke a nwere ike bụrụ nnukwu uru ka ịmalitere nyocha ihe ọdịnaya gị na saịtị a ma ama. Nwaleenụ onwe gị - detuo ụfọdụ ọdịnaya site na post a ma detuo ya na email.
Otu okwu ikpeazụ last enweghị m ike icheta otu m siri hụ Tynt… mana ejiri m n’aka na ndị enyi m ma ọ bụ ndị na - agụ akwụkwọ m gwara m maka ya, echefuru m onye! Ọ bụrụ na ọ bụ gị… mee ka m mara na m ga-emelite ọkwa a na kredit ụfọdụ.
Kwụsị ịkpọ ndị na-ere ahịa ka ha dịrị umengwụ!
Onye na -ere ahịa Peter Van Dam
Mar 17, 2011 na 6: 02 PM
Nwere ike njikọ ahụ gaa vidiyo vidiyo kwa? Nke ahụ ọ ga - enyere vidiyo ahụ aka ịrị elu na ọchụchọ ahụ?